Apple Tarisa chishongedzo chekupenga? | Ndinobva mac
Kana iwe wakatevera shanduko iyo ichi chigadzirwa chakave nacho kubvira Apple payakachiunza, iwe uchaziva kuti chaikohwa zvisingaenzaniswi kubudirira nekuti avo vanobva Cupertino vakatarisa pairi sechinhu chine chekuita nefashoni kupfeka uye kwete sechinhu chehunyanzvi. Yakagara ichitarirwa sedhizaina dhizaini yakabudirira kwazvo, ine mitsara yakavezwa inotaridzika zvakanaka pachiuno.
Zvese izvi, pamwe nezvishongedzo zviri muchimiro chemabhande zvakagadzirwa naApple pachawo, zvakamaka pamberi nepashure pevashandisi vanozopedzisira vanogona kuve newadhi yemhando yepamusoro uye panguva imwechete inogadziriswa kune chero mamiriro ezvinhu.
Kubudirira kwakadai kwakurudzira makambani echitatu-bato kuti vagadzire zvinonyanya kufadza zvinhu, pakati pazvo tine sarudzo yandinoda kukuratidza nhasi. Zviri pachena kuti iyo Apple Watch inofanira kupfekwa paruoko, asi kana iwe uchida kuzvipa zvakasiyana uye ita kuti ive yako yaunofarira pendendi, iyi ngetani ndizvo zvawanga uchitsvaga.
Pasina kupokana, ipfungwa inosetsa chose sezvo cheni yakabatana nepfungwa yeApple Watch nekushandisa imwe yehukoko hwepamutemo hwakagadzirwa neApple kusimbisa tambo kuApple Watch kunowanikwa kuti yakamiswa kubva pamutsipa.
Iwe unogona kunge uchifunga kuti haungamboise iyo Apple Watch mune iyo chinzvimbo, asi ndine chokwadi chekuti vamwe vevateveri vedu vangafarire nzira iyi yekushandisa yako Apple Watch apo, chero chikonzero, haudi kupfeka iyo Apple Watch pane yako ruoko uye unosarudza kuipfeka iri pendant mode.
Cheni iyi ine mutengo uri pakati 9 na12 ma euro zvinoenderana nekuti tinochida here cheiyo 38mm kana 42mm Apple Watch. Uye zvakare, isu tine ivo vanowanikwa mu goridhe, rose goridhe, nhema uye sirivheri, uchikwanisa kuve neanowirirana neApple Watch-pendant yakaiswa zvinoenderana neApple Watch modhi yaunayo. Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezve ichi chigadzirwa, shanyira chinotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Apple Tarisa chishongedzo chekupenga?
Ini ndinowana zvimwe zvekushandisa kwazvo zvichida kuziva uye zvinosetsa.
ZveApple, iyo iMac Pro ndiyo "yekupedzisira yekudyidzana naye" uye inozviratidza neakawanda mavhidhiyo